यस्ता थिए विवादित बने–बनाइएका रवीन्द्र अधिकारीका काम र सपनाहरु | Ratopati
यस्ता थिए विवादित बने–बनाइएका रवीन्द्र अधिकारीका काम र सपनाहरु
personबबिता शर्मा exploreकाठमाडौं access_timeफागुन १७, २०७५ chat_bubble_outline0
पछिल्ला चरणमा केपी शर्मा ओली मन्त्रीमण्डलका सबैभन्दा विवादित बने–बनाइएका मन्त्री थिए रवीन्द्र अधिकारी । चर्को हल्लाखल्ला नगरिकनै, लुसुलुस आफ्ना कामहरु अगाडि बढाइरहेका रवीन्द्र अधिकारीको नाम वाइडबडीमा जसै मुछियो, उनी भीषण आलोचना र आक्रमणको पात्र बने । कतिसम्म भने, अनुसन्धान, छानविन र न्यायिक प्रक्रियाका बाटाहरु खुल्दा नखुल्दै उनलाई ‘अपराधी’ ठहर्याउने काम समेत भयो । तर रवीन्द्र गलेनन्, ‘नैतिकताको पाखण्ड’ प्रदर्शन गरेर राजीनामा गर्ने हतारो पनि गरेनन्, खुरुखुरु आफ्ना कामहरु गरिरहे, आफूले देखेको सपनाहरु कार्यान्वयन गर्न क्रियाशील रहिरहे । ताप्लेजुङको उनको त्यो यात्रा पनि त्यसै कडीको निरन्तरता थियो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
र, अन्ततः उनले आफ्नो कर्तव्यपालनाकै सिलसिलामा दुःखद हवाइ दुर्घटनामा परेर ज्यानै पनि गुमाए ।
सरकार गठनको एक वर्षको समयावधि पूरा भएको सन्दर्भमा रवीन्द्र अधिकारीले आफूले मन्त्रीको हैसियतले गरेका र गर्न बाँकी रहेका कामहरुको बारेमा रातोपाटीका बबिता शर्मासँग कुराकानी गरेका थिए । वास्तवमै, मन्त्रीको हैसियतले उनले गरेका कामहरु के के रहे ? उनले देखेका सपनाहरु के के थिए र ती सपनाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि उनले के के योजनाहरु बुनेका थिए ? अनि आफूमाथि लागेका आरोपहरुका बारेमा उनी स्वयं के सोच्थे ? यी विषयहरुका बारेमा जान्न र बुझ्नका लागि हामीले उनको त्यो पछिल्लो अन्तर्वार्ता यहाँ पुनः पेश गरेका छौं ।
हाम्रो मन्त्रालयले आफ्ना कामहरु प्रभावकारी बनाउन समय समयमा समीक्षा गर्ने, विज्ञहरुबाट सुझावहरु लिने साथै विगतका कामहरुको पनि समीक्षा गर्ने गरेका छौँ । यहिअनुसार पाँचवर्षे रणनीतिक योजना बनायौँ, त्यसले पनि हामीलाई ठीक ढंगले 'ड्राइभ' गरेको छ ।
जहाज खरिदका प्रक्रियामा कमजोरी छ । त्यसमा अनुसन्धान भैरहेको छ । दोषीलाई कारवाहि हुन्छ । म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, त्यसमा मेरो संलग्नता हैन । आफ्नै प्रक्रियाले दुई किस्ता रकम गएको छ । त्यो जाने प्रक्रिया गलत हो भनेर कसैले कतै भन्छ भने त्यसको जवाफदेहिता म लिन्छु ।